“Faysalow Afkaaga Dadka Ha Ku Eryin…. Xirsiyowna Inaad Wax Iska Celi tidhaahdo Maaha…..” Xaaji Xaaji Cabdi-Waraabe | Salaan Media
“Faysalow Afkaaga Dadka Ha Ku Eryin…. Xirsiyowna Inaad Wax Iska Celi tidhaahdo Maaha…..” Xaaji Xaaji Cabdi-Waraabe
Hargeysa(SM):- Guddoomiyaha Guddiga Joogtada ah ee Aqalka Odayaasha Somaliland Md Xaaji Cabdikarariin Xuseen Yuusuf (X. Cabdi-Waraabe), ayaa baaq hogatus iyo erey-guurtiyeed ah kaga hadlay eedaymo ay dhawaan Saxaafadda isku weydaarsadeen Guddoomiyeha Xisbiga UCID Engineer Faysal Cali-Waraabe iyo Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan.
Xaaji Cabdi, waxa uu kula dardaarmay guud ahaan Siyaasiyiinta inay ka waantoobaan tiraabaha xanafta leh ee warbaahinta la isu mariyo isla markaana aanay fursad siinnin shaydaanka doonaya inuu dab ku huriyo kana faa?iidaysto khilaafka musliimiinta ka dhex oogma. Xaaji Cabdi-Waraabe oo maanta wareysi gaar ah siiyay hawl-wadeenno ka tirsan Akadamiga Suugaanta iyo Cilmi-baadhista. “Waxaan ka xumahay oo hadal yar aan ka odhanayaa hadallada dhex-maray Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo Faysal Cali Xuseen, awalka ma habboona in nin madax ahi wax caayo ama la caayo, haddii masuul af-legaaddo loo jeedinaya derejadaa la caayayaa.” Sidaa ayuu yidhi Xaaji Cabdi-waraabe.
Xaaji Cabdi oo dhambaal waayeelnimo u diraya Guddoomiyeha UCID ayaa yidhi; “Faysalow xisbi weyn baan dhisayaa iyo waan ilaaqtamayaa, madaxdana waan caayayaa waa kala laba isumana dhawa. Xisbigu sidaas waa ku baaba?ayaa iyagana sharafki waa ka duulayaa, halkaa waxa aan leeyahay Faysaloow waddadaa ka noqo magac baad leedahay, mid iyada inaad Somaliland tahay caamku waa ku yaqaannaa laakiin dadka ha iska eryin afkaaga ayaa dadka kaa fogaynaya. Nin masuula oo meel gaadhay inuu isagu degdeg wax u qabto mooyaane in la qabtaa waa xaaraan. Faysaloow waxa aan kugu wacdiyayaa inaad qadafkaa ka noqoto.”
Dhinaca kale Xaaji Cabdikariim Xuseen, ayaa wax-sheeg Odaynimo hawada u mariyay Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan. “Xirsi waxa aan leeyahay adigu madax baad tahay laantii u sarreysay ayaad tahay mansabkaa ku caawinaya hadduu Faysal qaldamo oo uu meel ka dhaco inaad adna ka daba tidhaado ma aha, waa inaad ka aamustaa. Aamuuskaa ku caawinaya oo kaaga sharaf roon. Sharafku waxa uu ku jiraa ninka ku caaya oo aanad caayin. Kol haddaad derejadaa gaadho oo aad Jamhuuriyadda madaxdeeda ka tirsan tahay inaad wax iska celi tidhaahdo maaha. Xishoodku wuu ku saacidayaa oo dadka oo dhan baa kugu raacaya. Xirsina waxa aan leeyahay ha u noqon hal-celintaa.” ayuu yidhi Xaaji Cabdikariim Xuseen Yuusuf.
Ugu dambayntii Odayga ugu da’da weyn Golaha Guurtida Somaliland Xaaji Cabdi-Waraabe, ayaa xusay qaab maangal ah oo ay mucaaridku si bilaa turxaan ah ugu dhalliili karaan Xukuumadda, una horseedi kara inay kasbadaan taageerayaal, isaga oo si adag uga digay adeegsiga kelmado curin kara naxli kala fogeeya bulshada, waxaanu yidhi; “Mucaaridku waa inuu garsheegaa oo wax shicibku ku raaco tilmaamaa oo maxay ah wershaha ha la sameeyo, waddooyinka ha la dhiso, nabadgelyada ha loo feejignaado, shidaal ha la loo saaro, dhallinyarada shaqo ha loo abuuro, dumarka ha la horumariyo. Ninkii xisbi doonaya waxa aan leeyahay mucaaridku waddooyin ayuu leeyahay.”